ISikole Sezifundo Zokwelapha e-UKZN sithole Igunya Eligcwele Lokuqhubeka Nokwethula Izifundo Eminye Iminyaka Emihlanu Ezayo – College of Health Sciences
Home » News » ISikole Sezifundo Zokwelapha e-UKZN sithole Igunya Eligcwele Lokuqhubeka Nokwethula Izifundo Eminye Iminyaka Emihlanu Ezayo
IKolishi Lezifundo Zezempilo (i-CHS) lithokoze kakhulu ngenxa yokunconywa uMkhandlu ngohlelo lwabo oluphambili lwezokwelapha kanye nohlelokufunda, futhi baphinde bancoma nezinhlaka zabo ezinhle kakhulu, uhlelo lokulekelela abafundi, uhlelo lokuqeqesha olusabalele i-Decentralised Clinical Training programme kanye nokuzilungiselela kwabo ukwamukela abafundi bezokwelapha be-90 Fidel Castro Cuban Collaboration abazongena e-UKZN ekupheleni kuka July.
I-CHS yahalaliselwa ngokuthuthukisa ezokuxhumana, umsebenzi wezokulekelela abafundi, uhlelo lokuhlala emakhaya ezindaweni zasemaphandleni e-KZN, okukhuthaza ukubumbana komphakathi kanye nohlelo lokuqeqesha imitholampilo olusabalele. I-HPCSA iphinde yahlonipha iSikole Sezokwelapha Ngemithi, nezinye zezikole ezithintekayo kuhlelokufunda kwezokwelapha kanye nobuholi nabasebenzi base-CHS ngogqozi nokuzibophezela ekuthuthukiseni uhlelokufunda lwezempilo ngokuqhubekayo.
Inqubo yokugunyaza iziqu iwuhlelo oluqhubekayo njengoba okuqukethwe kuhlelokufunda, futhi kwezinye izikhathi nezibalo eziphokophelwe zokubhalisa kubuye kushintshe ngokuhamba kwesikhathi. Inhloso yalokhu kugunyaza ukukhuthaza ubunyoninco bokulungiselela ukufundisa kube kunikezwa isiqinisekiso emphakathini sokuthi abafundi abaneziqu bazoba nolwazi namakhono angumongo ukuze bakwazi ukusebenza ngokuphephile, ngendlela enenqubonhle, baphinde babe ochwepheshe abazimele emsebenzini wabo.
KwabaseKolishi Lezifundo ZezeMpilo, ukufika kwabazogunyaza kulonyaka kubandakanye nokuhlolwa kwezizinda zohlelo lwe-Decentralised Clinical Training and Primary Healthcare okubalwa isibhedlela i-Queen Nandi (i-Lower Umfolozi) esiseMpangeni, isibhedlela iStanger, isibhedlela i-Edendale kanye neNorthdale eMgungundlovu, i-Cato Manor Clinic kanye ne KwaMashu Community Health Clinic. I-DCTP yanikezwa imvume ekhethekile yokuqhubekela phambili.
Enye inhloso yokufika kwabagunyazayo bekuwukubona ukuthi isikhungo siyakwazi yini ukwandisa umthamo wokubhalisa njengoba kwakuyalele uNgqongqoshe Wezempilo. I-HPCSA ihlola umphumela wokwandisa uthamo wabafundi kuqhathaniswa nezinsiza, nenanisiqhathaniso lothisha-nabafundi, ubukhulu bamalebhu nokusekelwa kwabafundi. Kulomzuliswano, i-HPCSA igunyaze ngokugcwele loluhlelo ukuthi lithathe abafundi abangama-250 bokuqala.
Ukuhlolwa bekulele kakhulu ohlwini lwemibuzo lokuzihlola, athathwayo ahlolisiswe yiqembu elihlolisisayo ebelibheka inhlalanjalo ezimpendulweni zezihloko ezihlanganisa ezokuphatha kuya kwezokwesekwa kwabafundi kanye nokwakheka ngokobuhlanga komthamo wabafundi bonyaka wokuqala nabathola iziqu, izinsiza zokufunda kusetshenziswa uhleloxhumano nezinsiza omtapo wolwazi neqhaza labafundi ekuqokweni kwabasebenzi besikhungo. Abasebenzi Ukwesekwa kwabasebenzi, ukuqeqeshwa kwabasebenzi nokubandakanyeka kwabafundi ocwaningweni nasezindleleni kwenza zalo nakho kuyabhekwa.
IPhini LeSekelashansela Eliyinhloko YeKolishi Lezifundo zezeMpilo, uSolwazi Busisiwe Ncama uthokoze kakhulu ngomphumela, ‘Lokhu kuwumphumela wokusebenzisana njengeqembu kwabo bonke abasebenzi kuhlanganise nemibono yabafundi noMnyango WezeMpilo e-KZN abebesebenzisana nesikhungo. Ngifisa ukubonga wonke umuntu obambe iqhaza ohlelweni lwe-MBCHB ngokuzinikela nokusebenza kwabo kanzima.’
Amagama: uMaryAnn Francis